Iindlela ezili-10 zokuKhusela iKhaya lakho ekuHanjisweni
Wonke umntu uyazi ukuba kubaluleke kangakanani ukugcina ikhaya likhuselekile. Uhlobo olulungileyo lokhuseleko lunokukukhusela, abantu obathandayo kunye nezinto onazo ekuqhekezweni nakwezinye iintlobo zokungena ngobundlobongela. Ngethamsanqa, zininzi izinto onokuzenza ukomeleza ukhuseleko ...
Ikhamera yoKhuseleko lweBhetri okanye iKhamera yoKhuseleko lwaSolar?
Iikhamera zokhuselo lwelanga kunye neekhamera zokhuseleko ezixhotyiswa ngebhetri zizinto ezimbini ekunokukhethwa kuzo zokubeka iliso kunye nokujonga iipropathi kwiindawo ezikude nezinzima. Ngelixa izixhobo eziguquke kakhulu ziyafumaneka kuwo omabini la mahlelo, umahluko ulele kwindlela abajongana ngayo nemfuno yabo yamandla. W ...
Intshayelelo kwiimpawu kunye neenzuzo zemilinganiselo yeqondo lobushushu kunye nokuqondwa kobuso bomatshini odityanisiweyo
Ukucinezela ukusasazeka kwentsholongwane, umlinganiso wobushushu obusetyenziswayo usetyenziswa kwiindawo ezininzi, ezinengxaki yokungasebenzi kakuhle kunye nomngcipheko omkhulu. Imilinganiselo yeqondo lobushushu kwisizukulwana sesibini kunye nokuqondwa kobuso bonke-in-nye umatshini usebenzisa imodyuli ye-infrared ephezulu ...